भक्तपुर घटना प्रकरण : श्रीमती र छोराको ह’त्यापछि विष सेवन ! « News24 : Premium News Channel
भक्तपुर घटना प्रकरण : श्रीमती र छोराको ह’त्यापछि विष सेवन !
प्रकाशित मिति : Sep 12, 2020
काठमाडौं, २७ भदौ । भक्तपुरमा एकै घरका ३ जना मृत भेटिएको घटनामा प्रहरीले गरेको प्रारम्भीक अनूशन्धानमा पारिवारिक कलहका कारण भएकाे तथ्य फेला पारेको छ । शुक्रबार राति भक्तपुरको मध्यपुर थिमि नगरपालिका–६, कुन्डोलमा एकै घरका ३ जनाको शव फेला परेपछि प्रहरीले घटनाबारे अनूशन्धान गरिरहेको छ ।
उनीहरु एकै परिवारका श्रीमान, श्रीमती र छोरा रहेका छन् । प्रहरीको प्रारम्भीक अनूशन्धानबाट श्रीमानले श्रीमती र छोराको ह’त्या गरेर आफूले पनि आ;त्महत्या गरेको खुलेको छ । प्रहरीका अनुसार घटना भएको घरको पहिलो तलामा छोरा सुशान्त, दोस्रो तलामा उनकी आमा सम्झनाको शव र तेस्रो तलामा सुदिपको शव फेला परेको थियो ।
शुदिपका छोरा १५ बर्षका थिए भने श्रीमती सम्झना ३४ बर्षकी थिइन् । सम्झना र शुसान्तको शव टाउकोमा धारिलो हतियार प्रयोग गरी गहिरो चोट लागेको अवस्थामा रहेको तर सुदिपको शरीरमा चोटपटक नभएकोले घटना गराउनमा शुदिपकै हात रहेको प्रहरीको अनुमान छ ।
सुदिपले छोरा र श्रीमतिको हत्यापछि बिष सेवान गरेर आत्महत्या गरेको हुनसक्ने अनुमान गरेपनि पोष्टमार्टम रिपोर्ट भने आइसकेको छैन । उनीहरु तीनै जनाको शव परीक्षणका लागि त्रिवी शिक्षण आस्पताल महाराजगञ्जमा राखिएको छ ।
पोष्टमार्टम रिपोर्टपछि थप जानकारी आउने प्रहरीले जनाएको छ । शुक्रबार घटना भएको थाहा पाएपछि सुदिपका भाइ सुनीलले प्रहरीलाई खबर गरेपछि महानगरीय अपराध महाशाखाको टोली घटनास्थल पुगेको थियो । उनीहरुको घरमा एउटा कुकुर पनि मृत भेटिएको थियो । सो कुकुर पनि विष खाएको कारण मरेको हुनसक्ने प्रहरीको अनुमान छ ।
प्रहरीले अनूशन्धानका क्रममा सो घरमा पारीवारिक कलह हुँदै आएको तथ्य पनि फेला परेको जनाएको छ । प्रहरीले छिमेकीमा सोधपुछ गर्दा श्रीमान श्रीमतिबीच विवाद हुँदै आएको बताएका छन् ।
केहि समयअघि सम्म श्रीमानले जागिर गर्ने गरेको तर पछिल्लो समय जागिर छाडेपछि घरमा कलह हुँदै आएको छिमेकीले बताएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पाई सहित २५ नेटवर्किङ कम्पनीमा संलग्न ५० जनालाई पक्राउ गर्न पत्राचार
आईपीएल : मुम्बईमाथि बैंगलोरको जित
झापामा ६५ वर्षीया एक महिलाको ह’त्या, खाटमुनि शव फेला
वडाध्यक्षमाथि हातपात : प्रहरीले मुद्दा दर्ता गर्न मानेनन्
access_time 6:55 am
access_time 6:38 am
काठमाडौं, १३ असाेज । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले एसिडको बिक्री वितरण नियमन गर्ने र आक्रमणविरुद्ध कडा
काठमाडौँ, १३ असोज । उपत्यकाको सुरक्षा जिम्मेवारीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था स्पष्ट भएसँगै प्रहरी समायोजनको प्रक्रिया अब अगाडि
काठमाडौँ, १३ असोज । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान